ICYMPSTONE ENTSHA YEC60, UKULUNGELA AMAQHAWE - IZIXHOBO
ICympstone entsha yeC60, ukuLungela amaQhawe
Ayingawo onke amaqhawe anxiba ii-capes, kodwa ukuba afuna ukunxiba iwotshi, i-C60 Lympstone entsha kuphela kwendlela enokukhethwa kwabo bakhupha ezona zibalaseleyo kuthi. Yenziwe nguChristopher Ward, le wotshi intsha yenqanaba lomkhosi ihleli entliziyweni yeRoyal Marines, idibanisa i-elite horology ngokungenakoyiswa.
Nokuba ukweliphi inqanaba, ubudala kunye nokuba uphelela phi ebomini, iLympstone ayilibaleki kuwo onke amaRoyal Marines. Ikhaya kwiziko loQeqesho loQeqesho iRoyal Marines (CTCRM) isiseko soqeqesho, iLympstone eDevon iqeqesha lonke ulwandle, abaqeshiweyo noovimba, beguqula ngamnye kubo ebafaneni abe ngamadoda omkhosi oxhobileyo, uKumkanikazi.
Ukusebenza noChristopher Ward emva kokuphumelela koQokelelo loMkhosi lwango-2019, iRoyal Marines yayifuna iwotshi 'yezixhobo' elite ukuhlonipha i-CTCRM Lympstone.
Ukuchaza ukuxinana kwamandla avela kwisiseko njenge-Lieutenant Colonel Michael Scanlon, iGosa eliyiNtloko le-Commando Training Wing lichaza 'i-commando mindset' njengoko ixhaswa ngumoya we-commando: ukuzimisela, isibindi, uburharha ebunzimeni kunye nokuzithemba. Ukongezwa kuloo nto, 'yimilinganiselo yama-commando' yokugqwesa, uqeqesho, ingqibelelo kunye nokuthobeka, Zonke ezihlala kwindawo ekuyiyo ukuba yiRoyal Marines Commando.
Ngale nto engqondweni, uChristopher Ward waphuma konke ukuvelisa iwotshi efanelekileyo yamagorha amakhulu ase-UK. Kubo bonke abo bazimisele ukuncama ubomi babo ngenxa yenkululeko kunye nenkululeko kwindalo iphela eluntwini, i-C60 ngumrhumo wokugqwesa, ukuthambekela, ukuthembeka kunye nobutyala oboniswe yiRoyal Marine Commandos.
Ngokufana nabazalwana bayo abathengisa kakhulu kwiNgqokelela yamaJoni ka-2019, ukujonga okuxananazileyo kwesi silwanyana sihle kwahluka ngendlela enye ebalulekileyo. Ngelixa i-C65s eyandulelayo ziwotshi ejonge ukubuyela umva ngokubhekisele kwi-CEO kunye nomseki ongumlingani uMike France, uyilo lwangoku lwe-C60 Lympstone iwotshi isekwe kwityala elitsha le-'Trident 3 'C60.
Ukufuna ukwenza iwotshi yezixhobo zangoku zilungele umkhosi wamanje u-Adrian Buchmann, intloko yoyilo lwemveliso eChristoper Ward uthathe ugqozi kwizixhobo eziqeshwe yiRoyal Marines.
Usebenzisa izixhobo ezifanayo ezisetyenziselwa ukwenza izixhobo, uWadi wayila idayala esuka kwikhabhoni eyenziweyo, ecaleni kwetyala leTrident Steel, egcwaliswe ngompu kunye nokuziva okumnyama. Usebenzisa ilaphu elichubekileyo elinobunzima beCordura, njengegiye ebonelelwe emkhosini, le strap ayizukuyeka.
Kukwabonakaliswe iwotshi yikhampasi yelanga kwi-bezel yangaphakathi ejikelezayo. Usebenzisa ilanga kunye neyure ukunceda ukuziqhelanisa, u-Adrian ubeka iwotshi enjengeyakhelwe ukonwabisa kwiindawo ezinobunzima. Ngaphezulu, ukongeza ekubeni ungangenwa ngamanzi ukuya kwi-600m, kukwakho noonogada abakhulu bokukhusela abajikeleze izithsaba ezibini ezijijekileyo nge-2 kunye ne-4 ngentsimbi.
Ukuba liliso lomkhosi, ukuchaneka kubaluleke kakhulu. Iwotshi nganye ye-C60 iqulethe i-chronometer eqinisekisiweyo ye-COSC, enokunyamezelana kwemizuzwana eyi-4 / + 6 ngosuku. Ngeeyunithi zomkhosi ezingqamanisa iiwotshi kude kube kwimbali ye-chronograph, uMike uthe i-C60 kufuneka ichazwe ngokuchanekileyo.
Ivenkile esembindini kaSeptemba, le wotshi iphefumlelweyo yaselwandle ikhupha umoya weLympstone, umoya onokuthi uqhutywe esihlahleni sakho ukukukhumbuza ngendawo esembindini we-commando mantra.
Iishawa ezakhiwe ezihlalweni
Iingcamango eziluhlaza okwesibhakabhaka kunye negolide
Izimvo ezi-3 zegaraji ezingafaniyo
Iingcamango zesinxibo seHalloween emadodeni